चीन थोक उत्पादन खेल उपकरण सेट जिम वजन रबर हेक्सागोन हेक्स dumbbells निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु Meiao
थोक उत्पादन खेल उपकरण सेट जिम वजन रबर हेक्सागोन हेक्स dumbbells
कास्ट आयरन, कास्ट फलाम
१० किलो, १० किलो/सेट+बक्स
तातो बिक्रि सुविधाजनक हेक्सागोनल Neoprene Vinyl Fixe Dumbbell सेट
नाम तातो बिक्रि सुविधाजनक हेक्सागोनल Neoprene Vinyl Fixe Dumbbell सेट
सामाग्री कास्ट फलाम र विनाइल लेपित र प्लास्टिक बक्स
रंग विभिन्न रंगहरु
तौल १० किलो
लोगो ग्राहक को आवश्यकता अनुसार
OEM OEM स्वीकार गर्नुहोस्
प्याकेज Opp झोला+गत्ते का डिब्बा+काठ (यदि ठूलो)
उपयोग शरीर सौष्ठव स्वास्थ्य
प्याकेजि &्ग र शिपिंग
अघिल्लो: सजीलो क्रोम लेपित कास्ट आयरन 20kg-50kg समायोज्य डम्बल सेट बोक्न को लागी
अर्को: उच्च माग उत्पादनहरु स्टेनलेस स्टील barbell अनुकूलित शरीर निर्माण अनुकूलन समायोज्य डम्बल
क्रोम चित्रकारी जिम समायोज्य वृद्धिशील 20kg ...
समायोज्य डम्बल सेट वजन 15kg 20kg 30k ...
संयोजन २० किलो समायोज्य डम्बल संग सेट ...
थोक 15kg, 20kg, 30kg शरीर सौष्ठव equipme ...
अद्वितीय उत्पादन नौसिखिया सिफारिश रबर उहाँ ...
घर शरीर सौष्ठव उपकरण ५० किलो इलेक्ट्रोप्लेटेड ...
सुरक्षा तपाइँको पहिलो विचार को एक सुरक्षा हुनेछ। के तपाइँ घर मा उपकरणहरु को लागी सुरक्षित छ? तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ? तपाइँका बच्चाहरु छन्? यदि तपाइँलाई स्वास्थ्य समस्या छ, तपाइँको डाक्टर संग जाँच गर्नुहोस् र su ...